Touch Me Not Wed Apr 28, 10:17:00 PM GMT+8
Anonymous Wed Apr 28, 10:22:00 PM GMT+8
စပ်လဲစပ်တတ်တယ် ခါတိုင်းတော့ ကွန်မန့်မရေးခဲ့ပေမဲ့ ဒီတခါတော့ အမဖျားမှာစိုးလို့ ရေးသွားပါတယ်အမရေ ဟားဟားD
khin oo may Wed Apr 28, 10:30:00 PM GMT+8
ဒါကြောင့်မို့လို့ ဂျီပုန်းဘဲလုပ်တယ် စိမ်းနေရဲ့သားနဲ့ခေါ်မဲ့သူမရှိတဲ့ ဘဝကို မခံစားနိုင်လို့ပါ။
မေးလ်ဘဲဘယ်သူမှ မပို့ကြပါဘူး. ကိုယ်ကလဲမပို့ဖြစ်ဘူးလေ. အဲသတော့ဖဘမှာဝင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ စာလေးဘာလေးပြန်လာတာပေါ့။
ီဇီးရိုးကော်မန့်ကို မံခံစားနိုင်လို့ လူလစ်တဲ့သန်းကောင်မှ ပိုစ်တင်ပါတယ် ဘာကွန်မက်မှမလာလဲ အေးလေ သူများတွေ အိပ်ကုန်ပြီဘဲ ဘယ်ရေုးနိုင်ပါ့မလဲလို့တွေးလိုက်ရင်စိတ်ချမ်းသာသွာေးရာ..
kay Wed Apr 28, 10:45:00 PM GMT+8
မမကွမ် ပြောတာ..သဘောကျပြီး.. ရီလိုက်ရတာ..
ဒါနဲ့..ဘာလီ ၈ က.. ပုဆိုးအမဲကွက် နဲ့ တင်ပလ္လင်ခွေ ထိုင်နေတာ..( အချစ်) ဆိုတာလား ဟင်..း)
kay Wed Apr 28, 10:46:00 PM GMT+8
မမကွမ် ကိုလည်း..ဒီမှာပဲ မန့်လိုက်အုံးမယ်.. သူ့ဆီမှာ မန့်ချင်ရင်..ဓါတ်လှေခါး နဲ့ ဆင်းမှ ရမှာ.. မို့..
ထမင်းသုပ် နဲ့..ခေါက်ဆွဲသုပ် ကို ကြည့်ပြီး တကယ့်ကို သွားရေ ယို သွားတယ်.. မမကွမ်..
ဇွန်မိုးစက် Wed Apr 28, 11:26:00 PM GMT+8
အစ်မချစ် တကယ်ဖျားတယ် ထင်သွားတာ။
တကယ်လည်း ဖျားနေတာကိုး။ :P
Anonymous Wed Apr 28, 11:47:00 PM GMT+8
သိင်္ဂါကျော် Thu Apr 29, 12:19:00 AM GMT+8
တစ်ခါတလေတော့လည်း ဒီလို ခံစားချက်တူဖူးလို့..
ရွှေနတ်သား Thu Apr 29, 02:04:00 AM GMT+8
အမှန်ပါဘဲ...ကော်မန့်လေးတွေမြင်၇င်သိပ်ပျော်တာအမ၇ယ်
ကိုယ့်အတွက် သူတို့ အချိန်ပေး၇ှာတယ်ဆိုပြီး ပီတိတွေဖြစ်လို့ 
မလာတော့လည်း..နားလည်ပေးပါတယ်...အားလုံးက အချိန်လုနေ၇တဲ့ သူတွေလေ..မအားတဲ့ ကြားက စာလေးတွေေ၇းတင်နေကြတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
Anonymous Thu Apr 29, 02:23:00 AM GMT+8
အမရေ ကွန်မန့်တော့ ဘယ်တော့မှ မရေးပါဘူး ။ အမြဲတမ်း စာလာဖတ်ပါတယ် ။ ကဗျာလေး ကောင်းတယ်အမ ။ မဖျားနဲ့တော့နော်။
ကိုဇော် Thu Apr 29, 02:47:00 AM GMT+8
နောက်ဆို တွေ့တာနဲ့ ခေါ. .အဲလေ. .ခေါ်ပြီသာမှတ် . .
မေးလ်ကတော့ ဘယ်သူ့မှ မပို့ဖြစ်ဘူး. . .စိတ်မကောင်း
ငိုနဲ့တော့. . .တိတ်တိတ် . .
ဖျားလည်း ဖျားနဲ့တော့. . ငါ့အမကြီး. . .ဟီးဟီး။
Moe Cho Thinn Thu Apr 29, 06:33:00 AM GMT+8
ဆေးခါးကြီး လာတိုက်ပါတယ် မမ။ :))
Anonymous Thu Apr 29, 08:16:00 AM GMT+8
comment comment comment ................................
~ဏီလင်းညို~ Thu Apr 29, 09:12:00 AM GMT+8
Unknown Thu Apr 29, 09:34:00 AM GMT+8
comment မရေးပေမဲ့ အမြဲဖတ်တယ်...
Vista Thu Apr 29, 09:48:00 AM GMT+8
မြဲရေးနေတာပဲကို ...ဟွင့် ဟွင့် 
ဒဏ္ဍာရီ Thu Apr 29, 10:10:00 AM GMT+8
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ..... ဘလော့်ဂါ ချစ်မရေ...။
ဒီလောက် ဖြစ်နေတာတောင် ကဗျာတပုဒ်က တက်လာသေးတယ်နော်။ အံ့ရော....... ချစ်မ..း)
သက်ဝေ Thu Apr 29, 10:10:00 AM GMT+8
အေးလေ... ပြောလိုက်ပါ Vis ရယ်...
အမြဲရေးနေတာပဲ ဟာကို.... ဖျားရတယ်လို့...
ကိုကြီးကပြောတယ်... ဒီလို အဖျားမျိုးအတွက် ဆေးရှိသေးဘူးတဲ့...
ဒီတော့ မဖျားအောင်နေပါ သူငယ်ချင်း...း))
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Thu Apr 29, 10:17:00 AM GMT+8
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) Thu Apr 29, 12:00:00 PM GMT+8
မြသွေးနီ Thu Apr 29, 12:31:00 PM GMT+8
မချစ်ရေ...ဒီမှာ ပါရာစီတမော့..။ မြန်မြန်လေးသောက်ပြီး ဘာလီ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေး လုပ်ဦးနော်။ အဖျားကိုမခံနိုင်ဘူး..။
ဟင့်.. ဒါပေမယ့် ကွန်နက်ရှင်လေးများကောင်းခဲ့ရင်ပေါ့...။
အင်ကြင်းသန့် Thu Apr 29, 12:54:00 PM GMT+8
မမရေ...ဒီလိုသာဖျားကြေး ဆိုရင်တော့ နလန်ထဖို့တောင် လမ်းမမြင်ဘူး...အိပ်ရာထဲမှာပဲ လူမမာလုံးလုံး ဖြစ်နေတော့မယ် ထင်တယ်...:)))
shwezinu Thu Apr 29, 01:18:00 PM GMT+8
သူငယ်ချင်း ကြည်အေး နေလေး ကောင်းဘို့
ရွှေစင်ဦးလေး မန့်လိုက်တယ်နော် gtalk ထဲမှာ accept လုပ်ထားပါတယ် ဒို့ ကိုက မဝင်ဖြစ်တာနော်
သူငယ်ချင်းရေ ကဗျာဆရာ တွေဒုက္ခရောက်သွားအုန်း သူငယ်ချင်း ကဗျာလေး တွေက တော်ရုံကဗျာ ဆရာလိုက်မမှီဘူးနော် တကယ်ပြောတာ
Anonymous Thu Apr 29, 02:13:00 PM GMT+8
ဘလော့ဂ်နမိုးနီးယားဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်။ ဒါမျိုးက ကုရခက်တယ်နော်. သတိထား.။
Thant Thu Apr 29, 02:41:00 PM GMT+8
ဘလော့ဂ်ဂါဖျားတာ ကဗျာတောင် ဖြစ်သွားတယ်နော်...... :))
Nge Naing Thu Apr 29, 02:48:00 PM GMT+8
ကဗျာလေးက ဘလော့ဂါတွေ အားလုံးရဲ့ ခံစားချက်ကို ဖွဲ့ဆိုထားတယ်ထင်တယ်။ ကျွန်မတော့ G-talk ကို တခါမှ မ၀င်ဖြစ်ဘူး။ G-mail စစ်ရင်တော့ အမြဲတမ်း offline လုပ်ထားတာများပါတယ်။ C-box နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခံစားချက်ကတော့ ထပ်တူကျပါတယ်။ လူငါးရာလောက်လာလည်တာတောင် နှုတ်ဆက်တာ ငါးယောက် မပြည့်တဲ့ ပို့စ်တွေရှိပါတယ်။ မှတ်မှတ်သိသိပဲ ပို့စ်တခုမှာ လူသုံးရာလောက် တနေ့တည်းလာလည်သွားတယ်၊ လာတဲ့လူအရေအတွက်ကို ပြောတာ ၀င်တဲ့ အကြိမ်ကို hit counter မှာ လာထိတာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး ၀င်တဲ့အကြိမ်က ဒီထက်ပိုများတယ်။ ဒါေC-Box မှာ တယောက်ပဲ နှုတ်ဆက်သွားတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ထက်ပို အဖျားကြိးတဲ့သူလည်း ရှိသေးတယ်လို့ မှတ်ပါနော့်။
သဒ္ဓါလှိုင်း Thu Apr 29, 03:20:00 PM GMT+8
sonata-cantata Thu Apr 29, 05:47:00 PM GMT+8
ဒီက ရောဂါကျွမ်းနေတဲ့ နာတာရှည်
မယ့်ကိုး Thu Apr 29, 07:58:00 PM GMT+8
မမကဗျာလေးက ချစ်စရာ ... လောကဓံဖျားလေး :P
မောင်သီဟ Fri Apr 30, 06:43:00 PM GMT+8